Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Hidaha iyo Dhaqanka Ogadenya (Ogaden Heritage Day) oo Lagu Qabtay Gaarisa
Maalinta Hidaha iyo Dhaqanka Ogadenya (Ogaden Heritage Day) oo Lagu Qabtay Gaarisa
Posted by ONA Admin	/ October 21, 2014
Shalay oo ay tarikhdu ahayd 20/10/2014 waxaa magaada Gaarissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Keyna lagu qabtay xafalad balaadhan tasooo ay soo agaasimeen ururka OYSU laantiisa Gaarissa. Waxaa xafladan lagu xusyay Malinta Hidaha iyo Dhaqanka ee S/Ogaadeeniya (Ogadenian Heritage Day).
Xaflada oo bilaabatay abaaro 4:oo pm (Galabnimo) ayaa waxana kasoo qayb galay bulsho farabadan waxana lagu dah furay wacdi diiini oo uu soo jeediyay sheekh Cabdikhadar Maxamad wacdigasoo dhinacya badan tabanayay isaguu dadka ku dhiri galiyay cabsida rabbi farayna kareebtoonaanta xumanta.
Kadib waxaa gobta lagu soo dhaweeyey marti sharaf kamid ahayd dadkii lagu casuumay munaasabada kuwaasi oo kahadlay ahmiyada uu leeyahay Hidaha iyo Dhaqanka. Martidii munaasabasda kazoo qaby gashay ayaa ku amanay ururka OYSU shaqada wanagsan uu hayo kuna dhiiri galayay in ay siidadaalaan.
kadib waxaa goobta lagu soo dhaweeyay kooxda Heeegan ee faraca Barsan oo soo bandhigtay Suugaan halgameed ay kamid ahayd Dhantooyin aad uqiima badan soona jiidatay dareenka kasoo qayb galayaasha.
Munaasabada lagu qabtay magaalada Garissa ay soo qaban qaabiyeen ururka OYSU fariciisa Gaarissa ayaa waxay kusoo dhamatay jawi aad u qurux badan waxayna munaasabadu soo dhammaatay iyadoo kazoo qaby galayaashii ay aad ugu xiisa qabeen inay munaasabadu sii socoto.